Tendrombohitra tsara indrindra eto an-tany: Avy any Hawaii ka hatrany Aostralia | Fitsangatsanganana tanteraka
Morontsiraka tsara indrindra eto an-tany
Alberto Legs | | Aostralia, Karaiba, USA, España, Filipina, Gresy, Meksika
Voanio voanio, rano manga ary fasika volamena. Ny sary tonga lafatra izay soritsoritsika amin'ny nofinofintsika mandehandeha ary mety ho lasa zava-misy marina noho ireo morontsiraka tsara indrindra eto an-tany izay mampisy paradisa miavaka arak'izay ilainy.
1 Lanikai Beach (Etazonia)
2 Grace Bay (Tiorka sy Caicos)
4 Escondida Beach (Mexico)
5 Ses Illetes (Espana)
6 Elafonisi (Gresy)
8 Matemwe Beach (Tanzania)
10 Maya Bay (Tailandy)
11 El Nido (Filipina)
12 Whitehaven Beach (Aostralia)
Lanikai Beach (Etazonia)
Ny fandikana azy, "Ranomasin'ny lanitra", dia mamaritra tsara izay heverina ho morontsiraka tsara indrindra any amerika. Any amin'ny ny morontsirak'i Oahu, iray amin'ireo nosy mahavariana indrindra any Hawaii, Lanikai no paradisa eto an-tany ahafahanao mankafy masoandro mody manonofinofy, onja misavoana, hazo rofia tsy misy fiafarana, indrindra fa ny rano manga turquoise izay manamafy ny antony maha-iray amin'ny archipelagos malaza indrindra eto an-tany.
Grace Bay (Tiorka sy Caicos)
Nomen'ny boky sy gazety samihafa hoe «morontsiraka tsara indrindra eto an-tany»Matetika i Grace Bay dia cove ao ny nosy Turcos sy Caciso be mponina indrindra, Providenciales. Morontsiraka misy mangarahara mihoatra ny natoraly sy fasika fotsy izay efa nitaona olona maro olo-malaza toa an'i Sofía Vergara raha ny fandosirana an'izao tontolo izao sy ny fialofana amin'ny iray amin'ireo morontsiraka izay mampahatsiahy antsika ny mety ho an'ny Karaiba toy ny morontsiraka lehibe eto amin'izao tontolo izao ary toerana izay miafina ny nosy rehetra, manomboka amin'ny Repoblika Dominikana ka hatrany Kiobà. paradisa hankafizanao any ho any.
Ilay antsoina hoe "Nosy Sambatra" any Karaiba dia mbola manaitra ny mpitsidika noho ireo tanànan'ny mpanjanatany, andian-flamingo fa indrindra ny morontsiraka toa ity Eagle Beach ity. Any avaratry ny nosy no misy ny kintana Aruba mivelatra amin'ny kilometatra marobe amin'ny rano turquoise, hazo rofia na ilay malaza hazo fofoti manjary lasa kisary lehibe amin'ity sakan'ny paradisa ity. Tsy misy isalasalana, iray amin'ny ny morontsiraka tsara indrindra eto an-tany.
Escondida Beach (Mexico)
Ny firenena meksikana dia misy ny morontsiraka tsara indrindra eto an-tany: manomboka amin'ny Rivera Maya malaza ka hatrany amin'ny morontsirak'i Pasifika, ilay sehatra Puerto Vallarta no teboka fanombohana tsara indrindra hahafantarana ilay harena voajanahary antsoina hoe Playa Escondida, cove izay niseho teo afovoan'ny Nosy Marietas. Fahita tsy fahita firy hita aorian'ny antsitrika ao anaty lava-bato izay manodidina ny manodidina ny nosy ary manambara toerana maha-marianina azy satria tsara tarehy izy io.
Ses Illetes (Espana)
Manonofy torapasika lavitra sy hafakely isika, saingy angamba tsy ilaina ny mankany lavitra mba hankafizantsika ny paradisa eto an-tany. Ohatra, ny Ses Illetes malaza, fasika iray mamihina ny morontsiraka angano roa ao amin'ny avaratry ny nosy Balearic Formentera. Ny toerana tonga lafatra izay ahafahanao mankafy ny seho snorkeling na ny fahatsapana ny ho eo amin'ny planeta hafa tsy dia lavitra loatra, indrindra fa rehefa firenena Espana isika izay manana morontsiraka tsara isaky ny zorony.
Any avaratry ny Kreta, ny lehibe indrindra amin'ireo nosy grika mandrafitra ny Aegean, misy morontsiraka mendrika ny faritry ny nofinofy Mediteraneana indrindra. Paradisa misy rano turquoise zarain'ny saikinosy izay manjavona amin'ny onja avo sy izay ny fasika dia mahazo loko mavokely noho ny fikaohon-dranomasina. Azo antoka fa iray amin'ny ny morontsiraka grika tsara indrindra ary angamba avy amin'izao tontolo izao mba hamenoana ny kolontsaina sy ny angano manafina ny nosy Kreta.
Any andrefan'ny La Digue, iray amin'ireo nosy mandrafitra an'i Seychelles manonofinofy ao amin'ny Ranomasimbe Indianina, dia iray amin'ny ny morontsiraka tsara indrindra eto an-tany. Miaraka amin'ny fasika fotsy sy rano kristaly i Anse Source D'Argent dia misongadina amin'izany vatolampy boribory goavambe izay, mifanohitra amin'ny toetrany mahaliana, nahatonga an'ity toerana ity ho iray amin'ireo toerana be mpangataka indrindra amin'ireo maodely sy mpamolavola rehefa manatanteraka ny fampielezana doka. Mazava ho azy, miandry amin'ny filentehan'ny masoandro, mety ho iray amin'ireo tsara tarehy indrindra eto an-tany.
Aorian'ny a safari eo anelanelan'i Kenya sy Tanzania, ny safidy tsara indrindra hamaranana ny traikefa nahafinaritra nataonao dia ny fitsangatsanganana ny nosy Zanzibar, miala ny morontsirak'i Tanzania. Paradises an'ny trano fanjanahan-tany, hazo rofia ary morontsiraka toa ity Matemwe, avaratra atsinanan'ny nosy lehibe. Toerana ahafahanao mankafy ny ranony manga, ny ampahan'ny ala mikitroka na ny fahafaha manao a fitsangatsanganana dhow, sambo mahazatra an'ny morontsiraka atsinanana afrikanina feno firaketana miafina toa ny morontsirak'i Madagasikara na Mozambika.
Tongava iray amin'ireo firenena asiana mazàna, Myanmar dia manetsika ny majika amin'ireo tanànan'ny fanjakana lehibe, pagoda sy stupa na tanàna be olona. Na izany aza, vitsy no maminavina fa any amin'ny morontsiraka atsinanana dia mety misy torapasika toy ny paradisa Ngapali, tsiambaratelo lehibe an'ny Birmania taloha. Vary voanio sy rano manga iray kilaometatra lava monja no resin'ny resy vitsivitsy ary manaitra an'i Edena tsy azo antoka alohan'ny ahitan'ny olona maty rehetra azy.
Maya Bay (Tailandy)
Tamin'ny taona 2000, ny horonantsary The Beach nosoratan'i Leonardo DiCaprio nampahafantarina ny besinimaro ny morontsiraka iray izay ao Nosy archipelago Thai an'ny Koh Phi Phi izay hanova ny fizahan-tany sy ny tontolon'ny backpacking mandrakizay. Herintaona taty aoriana, ary na dia eo aza ny valalabemandry, ny toerana toa an'i Maya Bay dia manohy manetsika ny firafitry ny fifangaroana karst lehibe tafiditra ao anaty ranomasina ary voahodidin'ny sambo miloko zato.
El Nido (Filipina)
En Palawan, iray amin'ireo Nosy maherin'ny 7 mandrafitra an'i Filipina, misy faritra fantatra amin'ny anarana hoe El Nido izay nanjary endrika solontena indrindra amin'ity firenena nofinofy ity. Morontsiraka mihoatra ny 50 tafangona ao anaty enclave iray ihany izay manasa anao ho very eo amin'ireo lohasaha feno harambato, tanàna mahazatra, ala mando na rano manga turquoise izay hisarika anao mankany amin'ny tsiambaratelo vaovao.
Whitehaven Beach (Aostralia)
Ny goavambe aostralianina dia mahasahana ny morontsiraka isan-karazany: manomboka amin'ny faran'ny Bondi Beach any Sydney ka hatrany amin'ireo zava-mahatalanjona ao amin'ny Gold Coast any Queensland, mamakivaky izay heverina ho Ny morontsiraka tsara indrindra indrindra any Aostralia, Whitehaven Beach, ao amin'ny Nosy Whitsunday. Cove fasika fotsy sy rano manga any amin'ny morontsiraka atsinanan'i Aostralia mety tsara hifandraisana antsitrika ao amin'ny Great Barrier Reef malaza.
Inona araka ny hevitrao no morontsiraka tsara indrindra eto an-tany?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fitsangatsanganana tanteraka » Morontsiraka tsara indrindra eto an-tany
Renivohitra afovoany Atsinanana
Inona no ho hita any Oslo